मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनः वामदेव र नारायणकाजी बरिष्ठ उपप्रधानन्त्रीको लाइनमा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२९ असार २०७७, सोमबार १५:३८ English
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनः वामदेव र नारायणकाजी बरिष्ठ उपप्रधानन्त्रीको लाइनमा
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २८ कार्तिक । सत्तारुढ नेकपाका नेता वामदेव गौतमले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे गरेको टिप्पणीले राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष तथा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता गौतमले प्रधानमन्त्री बाहेक अरु सबै मन्त्री फेरिने खुलासा गरेका छन् ।
एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भनेकै सबै मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ बनाउने भन्ने अर्थमा बुझ्न आग्रह गरेका हुन् । नेता गौतमले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ, के मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न लाग्नुभएको हो ? उहाँले अब गर्ने बेला आएको बताउनुभयो, उहाँले पूर्नगठन गर्नुहुन्छ ।’ पुनर्गठन भनेकै मन्त्रीको राजीनामा नमागिने तर अहिले रहेका प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री नरहने र नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्ति हुने नेता गौतमको भनाइ छ ।
बंगलादेशका राष्ट्रपतिको स्वदेश फिर्तीलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी छ । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम वा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बनाइने विषयमा आन्तरिक छलफल हुन सुरु भएको छ । गौतम र श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर उपप्रधानमन्त्री बनाइने र कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने विषयमा समेत छलफल चलेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।
२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार १२:२१ मा प्रकाशित
डा. सूर्यराज र मुमारामले साझा पार्टी छोडे	२८ असार २०७७, आईतवार २०:५२
लागु औषध मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै बार्गेनिङ गर्ने पत्रकार पक्राउ	२८ असार २०७७, आईतवार २०:३१
उच्छृङ्खल समाचार प्रशारण भएपछि नेपालले भारतमा पठायो ‘प्रोटेस्ट नोट’	२८ असार २०७७, आईतवार १८:०६